अहिलेको आवश्यकता समर्थन फिर्ता होइन, संसदबाट राजीनामा हो : विकास तिवारी
(अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी)
० मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
— मधेशको राजनीनि जसरी चुनौतिपूर्ण र ठोस ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यस्तो हुन सकेन । मधेशको राजनीति अंकगणितको हिसाबले निर्णय हुने राजनीति होइन । अहिले मधेशमा भइरहेको राजनीतिले केही निकाश दिन सक्दैन भन्ने मैले बुझेको छु ।
० सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा केहि उपलब्धि हाँसिल हुँदैन त ?
— हँुदैन त्यो त देखिएकै छ । राज्य आफ्नो नीति, नियम र कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढिरहेको छ । मधेशी दलहरूले संविधान जलाए संविधान जलाइसकेपछि त्यो संविधानलाई नमान्ने भनिएको बुझिन्छ । फेरि मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले संविधानको धारालाई नै आत्मसात गर्दै सुशील कोइरालालाई भोट दिएर संविधान मानिदिए । मधेशका नेताहरूले आफ्नो भनाई र काम गरार्ईमा फरकपना देखाउँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । सरकार फेरबदलमा मधेशी मोर्चाको आवश्यकता महसुस गरिएपनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर संविधान निर्माण गरेका हुन् र बिस्तारै उनीहरू मिलेर नै संविधान कार्यान्वयनका दिशामा जान्छन् । मधेश राजनीति गोलचक्कर फँसेको महसुस गर्दैछु । अहिलेको अवस्थामा मधेशी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै तुक छैन ।
० पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले सीमांकनको विषयलाई थाती राखेर आयोग मार्फत टुङ्याऊ, अरू विषयलाई लिएर अगाडि बढौं भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— यो त मधेशी मोर्चाले बुझ्ने विषय हो । सवाँ करोड मधेशी जनताको माग के हो ? मधेशी जनताले खोजेको के हो भनेर । मुख्य विषय सीमांकन नै हो, एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा आधारित राज्य व्यवस्था भएकोले यसले राजनीतिलाई गाउँ स्तरमा लैजान सक्ने शक्ति काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भयो, यो शक्तिलाई विभाजन गरेर गाउँ स्तरसम्म अधिकार पु¥याउन सकिन्छ कि भनेर नै संघीयतामा गएका हौं । संघीय नेपालभित्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समग्र मधेश प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न चरणहरूको आन्दोलन पनि भए । आन्दोलनका क्रममा धेरै जनाले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो शहादत झापादेखि कंचनपुरसम्मको मधेश प्रदेशको लागि भएको हो । संविधानमा भएको पूर्णविराममा परिवर्तन गर्दैमा मधेशको प्रतिनिधित्व हुने त होइन मुख्य विषय त सिमांकन हो । मधेशले खोजे अनुरूपको सीमांकन संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । मधेशी जनताले अधिकार खोजेका हुन् ।
० सीमांकनको सम्बन्धमा ठूला तिन दलको मनस्थिति कस्तो रहेको छ, तपाईको बुझाईमा ?
— यो देशको स्थायी शक्ति सेना, पुलिस र कर्मचारी हुन् । त्यसमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व रहेको छ । उनीहरूको इच्छाअनुसार नै संविधानमा खसआर्यको व्याख्या भएको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर अहिलेको नयाँ संविधान ल्याएको हो र अब मिलेर नै संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदैछन् । । अहिले कांग्रेस र माओवादी नदेखिने गरी पहाडकेन्द्रित भएको छ भने एमाले देखिने गरी पहाडकेन्द्रित भएको छ । पहाडकेन्द्रित भएर बिस्तारै संविधानलाई पारित गर्दै लैजाने यो तीन ठूला दलको मनस्थिति मैले बुझेको छु ।
० ठूला दलहरू निर्वाचनको तयारी र संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् भने मधेशी मोर्चा आन्दोलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर अगाडि बढेको छ । अब मधेशमा हुने आन्दोलनले समस्याको समाधान होला ?
— मधेशको एउटा समस्या मधेशी मोर्चा पनि हो । मधेशी मोर्चा आफ्नो निर्णयमा टिक्न सक्दैन । कहिले संविधान मान्दैनौं भनेर जलाउँछ फेरि त्यही संविधानको मान्यतामा रहेर भोट हाल्छ । मधेशमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुनु र ती समस्याहरूको समाधान नहुनुको प्रमुख कारण मधेशी मोर्चा हो । संविधान जलाउँछ फेरि सत्ता प्राप्त हुने लक्षण देख्ने बित्तिकै भोट हाल्न पुग्छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्छ, संसदबाट राजीनामा गर्दैन । यसरी त अधिकारको लागि भनेर गरिएको आन्दोलन नै बदनाम हुन्छ । मधेशको राजनीतिमा त्याग र समर्पण देखिएन । मधेशी मोर्चाको काठमाडौं केन्द्रित गतिविधिले समस्याको समाधान दिएन । राजनीतिमा समस्याको समाधान दिन सकिंदैन र संमग्र रूपमा समाजलाई अगाडि बढाउन सकिंदैन भने त्यसको केही अर्थ रहँदैन । मधेशले अधिकार खोजेको छ मधेशी मोर्चा यो अधिकारको लागि भइरहेको आन्दोलनलाई भजाउने काम मात्र गर्छ नभए यो दश वर्षको अवधिमा मधेश आन्दोलनको केही न केही निकास निस्कनुपर्ने हो नि । मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो भने मोर्चाका कार्यकर्ताले शहादत दिनुपर्ने हो किन सर्वसाधारण जनताको ज्यान जान्छ । सप्तरी घटना हुँदा मधेशी दलको एउटा पनि सांसद त्यहाँ देखिएनन् । मधेश आन्दोलनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यो भइदियो । विगतको आन्दोलनमा पनि मोर्चाका नेताहरू अगाडि थिएनन् सर्वसाधारण जनता थिए । जनता के का लागि आन्दोलनमा आएका छन् त्यो बुझ्नुपर्छ । मधेशी मोर्चाको माग र जनताको माग एउटै नहुन पनि सक्छ ।
० तर, आन्दोलनको नेतृत्व त मोर्चाले लिइरहेको छ नि ?
— मधेशको राजनीति मधेशी मोर्चा मात्र होइन । यहाँको सवा करोड जनताले के खोजेका छन् त्यो बुझ्नुपर्छ । मधेशमा भएको आन्दोलन मधेशी जनताले गरेको आन्दोलन हो र मधेशको राजनीति अंकगणितीय दृष्टिकोणले निकास हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता होइन संसदबाट राजीनामा गर्नु हो । त्यो मोर्चाले गर्न सकिरहेको छैन ।
० हामी सडक र सदनबाट लडिरहेका छौं भन्छन् नि मोर्चाका नेताहरूले ?
— नेपालको राजनीतिमा जतिपनि ठूला–ठूला परिवर्तनहरू भए त्यो सबै सडक आन्दोलनले गर्दा नै भएको हो । अहिले बनेको संविधान गणितको आधारमा बनेको हो त्यसमा मोर्चाको अस्तित्व देखिएन । यदि मधेशी मोर्चा संसदबाट राजीनामा दिएर सडकमा आयो भने सडक बलियो हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर सुरू गरिन्छ तर आन्दोलन सधैं हिंसात्मक भइरहेको छ यसको निकास जरूरी छ ।
० मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई संसदबाट राजीनामा गर्न केले रोकिरहेको होला ?
— २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्म मधेशको काम नै भएन । न संविधान निर्माणको काम भयो न मधेशको राजनीति मधेशी जनताको झुपडीमा पुग्न सक्यो । खालि काठमाडौं बस्ने सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने, पार्टी खोल्ने काम मात्र भयो । पावर पोलिक्टिसलाई मधेशी दलका नेताहरूले यति एक्ससाईज गरिसकेका छन् कि त्यो छोड्न गाह्रो भइरहेको छ त्यही भएर समस्या देखिएको हो । त्याग भएन भने आन्दोलनको विकास हुँदैन । एक दशकको अवधिमा मधेशी जनतामा राजनीनिक चेतनामा वृद्धि भएको छ भने विश्वमा नै मधेश भनेको एउटा द्वन्द्व हो भनेर स्थापित भएको छ । आन्दोलनलाई सही रूपमा प्रवद्र्धन गर्न नसकेको हुनाले मधेश आन्दोलनमा बढी क्षति हुन पुग्यो । तर यो क्षतिले मधेश आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने होइन । मधेश आन्दोलनको वास्तविक तथ्य र सत्य के हो त्यसलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
० तपाई किन काठमाडौं छाडेर सप्तरीमा आएर राजनीतिमा लाग्नुभयो ?
— काठमाडौंमा बसेर हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्ने लाग्छ मलार्ई । मधेशमा संघीयता, लोकतन्त्र, संमग्र मधेश प्रदेश चाहिन्छ । तर, त्यसका साथै आफ्नो ठाउँमा सामाजिक आन्दोलनको पनि आवश्यकता महसुस गरेर म सप्तरी आएको हुँ । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू जमिनसँग जोडिन सकेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने, आफु लगायत आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी सबैलाई काठमाडौंमा राख्ने अनि राजनीति मधेशमा गर्ने यो दोहोरो प्रवृत्तिले गर्दा मधेश आन्दोलनमा धेरै क्षति पुगेको छ । आफ्नै ठाउँमा काम गर्दा सफलता पनि पाइन्छ र जनताको तर्फबाट मार्गदर्शन पनि पाइन्छ त्यसैले मलाई काठमाडौैंको होइन सप्तरीको माया छ ।
० तपाई मधेशी मोर्चामा आबद्ध भएर सँगै हिंड्न किन सकिरहनुभएको छैन ?
— त्यसमा हामी दोषी होइनौं उहाँहरू दोषी हुनुहुन्छ । उहाँहरू सप्तरी आउनुभयो भने २२ हातको धोतीको कुरा गर्नुहुन्छ थानकोट कट्ने बित्तिकै उहाँले बिर्सनुहुन्छ । जुन राजनीतिक दलले समग्र मधेश प्रदेशको कुरा आप्mनो राजनीतिक घोषणा पत्रमा राख्छ त्यो दिनदेखि नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) त्यो पार्टीसँग एकीकरण गर्न जुन बेला पनि तयार हुन्छ । यो विषयलाई छाडेर हामी कुनै पनि पार्टीसँग एकीकरण गर्न स्क्दैनौं किनकी मधेशमा ४० प्रतिशत पहाडी समुदाय छन् भने ६० प्रतिशत थारू, मधेशी सबै मिलाइ रहेका छन् । बसाईसराई मधेशको धेरै ठूलो समस्या भइसकेको छ ।
० तर, एक मधेश प्रदेश व्यावहारिक छैन भनिँदै छ नि ?
— व्यावहारिक छ कि छैन भनेर कांग्रेस, एमाले माओवादीले भनिदिनुपर्ने । अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन कुरा उठाइएको छ यो व्यवहारिक रहेको छ र ? विश्वमा २८ वटा देशमा संघीयता छ । सबै संघीय संविधानमा के व्यवस्था भएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । उसको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, संख्या निर्धारण गर्ने प्रादेशिक सरकारको निर्णयमा आधारित हुन्छ । यहाँ सबै कुरा केन्द्रले गर्ने भनिएको छ यो संविधानको विशेषता नै संघीयता हो भने केन्द्रले नै सबै थोक गर्ने भएपछि त यो संघीयता संविधानमा मात्र सीमित भयो व्यवहारमा लागु भएन नि यो कुरा बहसमा आउनुपर्दछ ।
० निकास के हो त ?
— यो संविधानलाई हामीले मानेका होइनौं मधेशका राजनीतिक दलहरू अब यो संविधानको पुर्नलेखनमा र संमग्र मधेश प्रदेशको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो संविधानमा धेरै रोगहरू छ त्यसैले एउटा–दुईटा रोगको उपचार गरेर निको हुँदैन । यो संविधानलाई हामीले मानेका छैनौं त्यसैले हामी यो संविधान अन्तर्गत हुने कुनैपनि चुनावमा भाग लिँदैनौं ।
प्रकाशित मिति : २०७३।१२।११ गते शुक्रबार